Ngekhebula le-USB ukulanda idatha kalula
Usayizi omncane, Ishadi elinemininingwane
Ibhethri inikwe amandla
Lokhu kulula kakhulu ikhawunta yomnyangoinikwa amandla yibhethri kuphela. Abaningi bethu Izibali zeminyango yimikhiqizo enelungelo lobunikazi. Ukuze sigweme ukukopela, asizange sibeke okuqukethwe okuningi kuwebhusayithi. Ungathintana nabasebenzi bethu bokuthengisa ukuze bakuthumelele imininingwane enemininingwane mayelana nenkampani yethu izinto zokubala zeminyango.
Inani lokugeleza kwabagibeli njengamanje lihamba phambili emakethe. Ngaphansi kwethonya lendawo, indawo ezungezile, ithrafikhi nezinye izici, ukuhlaziya kanye nezibalo zenani lokugeleza kwabagibeli kungenziwa ngokwesayensi nangempumelelo, futhi izinqumo zokusebenza kuyo yonke imakethe zingenziwa ngesikhathi esifanele, esesivele saba khona. intuthuko. Iqhaza elibalulekile lemodeli yebhizinisi lemakethe, ukusetshenziswa kwezindlela zesayensi ukuqoqa idatha yokuhamba kwabagibeli kuyindlela yokubamba amathuba ebhizinisi emakethe yonke.
Ikhawunta yomnyango we-HPC001 iyithuluzi lokubala lokubala ukugeleza kwabagibeli. Incane, ilula, futhi kulula kakhulu ukuyifaka. Iphinde inikeze ukuphathwa kwedatha okuphelele. Ukuze kuhlangatshezwane nezidingo ezihlukahlukene zamakhasimende, iyafakwa futhi isetshenziswe ezitolo ezinkulu, ezinxanxatheleni zezitolo nakuzo zonke izindawo zokungena ezitolo. Kuthuthukisiwe, I-HPC001 izinto zokubala zeminyangoingabala kalula inani lokugeleza kwabagibeli ngesikhathi ngasinye sosuku, okulungele ukunikeza abathengisi inkomba ehlelekile. Ngezinguquko ekuhambeni kwabagibeli, yonke indawo ingasatshalaliswa ngokufanelekile, izinsiza zabantu zingahlelwa ngokufanele, futhi izindleko zokusebenza zenxanxathela yezitolo nezitolo ezinkulu zingalawulwa. Ngokuqhathanisa ukuhamba kwabagibeli ezikhathini ezihlukene, amasu okumaketha nokukhangisa angalungiswa, okwandisa kakhulu izithakazelo zezitolo ezinkulu. Ilungele izindawo zokudayisa, izindawo zamasiko nezemidlalo, izindawo zokuzijabulisa, izindawo zomphakathi nezinye izindawo.
Izici zezinto zokubala zeminyango ye-HPC001
1. HPC001 ikhawunta yomnyango inezilimi ezimbili ezisebenzayo, isiShayina nesiNgisi.
2. Isikrini se-LCD esingu-1.15 intshi.
3. I izinto zokubala zeminyango ibhethri ingashintshwa njalo ezinyangeni eziyisithupha ukuze isebenze, okuyinto elula futhi elula.
4. Ukusetha nokuphatha okulula, okungase kusetshenziswe izinkinobho ezikukhawunta.
5. I ikhawunta yomnyango Kudingeka kuphela ukwenza ukuphathwa kwekhawunta nge-Windows, ayikho isofthiwe eyengeziwe edingekayo.
6. Usayizi omncane (113 * 67 * 20 mm) nesisindo esilula 213 amagremu.
7. Ukukhanya kwe izinto zokubala zeminyango isibonisi sizokhanya uma othile edlula.
8. Ukwaziswa kuzovela esibukweni lapho ibhethri liphansi.
9. Ukwaziswa kuzovela esibukweni lapho isignali ibuthakathaka.
10. Ngokujwayelekile ubale phakathi kwebanga lamamitha angu-2.5, kodwa ungathuthukiswa ube amamitha angu-9 ngaphandle kokuphazanyiswa.
11. I izinto zokubala zeminyango inkumbulo yangaphakathi ingagcina okungenani amahora angama-500 wamarekhodi.
12. Isisekelo sepulasitiki kanye nedivayisi yohlaka oluhlangene ingakhethwa ngokuthanda kwakhe.
13. I izinto zokubala zeminyango Idatha ingakhishwa ngosuku nesikhathi.
Sinezinhlobo eziningi ze-IR ikhawunta yomnyango, 2D, 3D, AI umnyango abantu counter, kuhlale kukhona okuzofanelana nawe, sicela usithinte, sizoncoma ezifanele kakhulu ikhawunta yomnyango ngawe emahoreni angama-24.
Abantu bomnyango we-MRB baphikisa ividiyo ye-HPC005
Okwedlule: I-MRB i-automatic people counter HPC005S
Olandelayo: Ikhawunta yethrafikhi ye-MRB yabantu abadayisayo ababala i-HPC002
I-Door People Counter
umnyango abantu ukubala
umnyango wokubala abantu uhlelo
Abantu be-IR bayaphikisana
abantu counter endlini
abantu counter ngaphandle
I-People Counter sensor